Ramadan Mubarak: Dunida Islaamka oo Maanta Laga Soomay. | ogaden24
Ramadan Mubarak: Dunida Islaamka oo Maanta Laga Soomay.
Caalamka islaamka intiisa badan ayey maanta oo Khamiista ah kuna beegan 17-05-2018 u tahay maalinta u horeysa bisha barakaysan ee Ramadan. Dalalka Sucuudi, Masar, Iran, Indunuusiya iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka ayaa maanta Khamiista laga soomayaa.
Waa bil barakaysan, waxaa la xiraa Ibleyska ku dhaartey in uu bini’aadamka waddada xaqqa ah ka leexinayo, waxaa la furaa albaabada jannada, waxaana rabbi u ballan qaadey dadka sooma in ay jannada ka galayaan albaab la yiraahdo Al-Rayaan.
Dhammaan bahda ONA waxay farxadda la wadaagayaan akhritayaasheeda qiimaha badan leh, waxaana leenahay rabbi ha inaka aqbalo camalka kiisa wanaagsan, Ramadaan Mubarak.